Talooyinka Habeenka Kowaad ee Arooska. | shumis.net
Home » galmada » Talooyinka Habeenka Kowaad ee Arooska.
Talooyinka Habeenka Kowaad ee Arooska.
arooskaHabeenka arooska waa habeenka kowaad ee wiil iyo gabadh ay kulmaan iyaga oo isku ah say iyo oori kuwaas oo arooska ka hor ku kala noolaa laba adduunyo oo kala duwanaa. Waa habeenka ugu muhiimsan nolosha guurka ee lammaanaha oo caruuska iyo caruusaduba la rabo inay ogaadaan inay bilaabayaan nolol cusub.
Habeenku maaha habeen midna caadi u ah oo labaduba waxay dareemayaan deganaansho la’aan, gabadhuna waxay si gaar ah u dareemaysaa cabsi, werwer, iyo xishood. Haddana, waa habeen labaduba farxad iyo riyaaq hoos ka dareemayaan si mid kastaba midka kale u fahmo si ay u bilaabaan nolol-guur oo raaxo leh.
Waa habeen labadaba uga baahan in si taxadar leh u wada maamulaan si aanu u dhicin khalad saamayn ku yeesha nolosha guurkooda mustaqbalka. Caruuska iyo caruusadaba mid kastaba waxaa isku dayayaa karaankiisa si umuuruhu ugu fududaadaan. Mid kastaba waxaa uu kula dhaqmayaa midka kale dabacsanaan, jiljileec, naxariis, iyo taxadar weyn. Waa habeen mid kastaba sugi la’yahay sidii mid kastaba midka kale ugu dhiirran lahaa una bilaabilaah sheeko isku soo dhaweysa labadooda oo horseedda raaxo iyo farxad. Habeenkaas waxaa labadaba la gudboon inay is-dejiyaan wadana sheekaystaan si hawluhu ugu fududaadaan. Sayga waxaa laga rabaa inuu kula dhaqmo ooridiisa cusub naxariis iyo sheeko macaan oo qalbigeeda dejisa.
AQRISO: Ka Fikir 6 Waxyaabood Ka Hor Go’aan qaadashada Furriinka
Si gabadhu u uga adkaato werwerka, cabsida, iyo xishoodka hareereeya habeenkaas, waa in caruusku kula dhaqmaa caruusadiisa naxariis, asluub, dabacsanaan, iyo jacayl. Waa inuu u diyaariyaa caruusadiisa xidhiidh ku abuura kalsoooni una sharraxaa in werwerka iyo cabsida ay qabtaa aanu sabab lahayn kuna dhiirigeshaa inay hadasho. Waa inuu ogaadaa in ooridiisa cusub ay aad ugu baahantahay inay dareento jacaylkiisa iyo naxariistiisa iyo inay maqasho ammaantiisa. Caruusku waa inuu u muujiyaa caruusadiisa u dhawaansho iyo mukhlisnimo iyo inuu ka dhawro cadaadis iyo xoog kuna dadaalaa inuu ka yareeyo fulaynimada. Waa wax dabiici ah in caruusaddu ka xishooto inay si caadi ah ula hadasho caruuskeeda habeenka kowaad ee arooska.
Caruusku waa inuu kula hadlaan hadal macaan, dabacsan, naxariis leh si uu si tartiib-tartiib ah qalbigeeda ugu galo isaga oo og inay caadi tahay inay maqlayso iyada oo aamusan si ay marba u siiso jawaab kooban. Gabadhu waa inay fahamtaa, dhankeeda, inay waajib ku tahay inay saygeeda cusub la qaybsato farxadda iyo jacaylka waana inay u hoggaansantaa rabitaankiisa dabiiciga ah. Waa inay ogaataa in galmadu tahay waajib la xidhiidha abuurka Eebbe (S.W.T) Aadanaha isla markaana xusuusataa xikmadda ku jirta si ay uga adkaato werwerka iyo cabsida ay dareemayso habeenkaas.
Haweeneyda caadiga ah waxaa laga yaabaa inay marka hore xishood is-giijin ah muujiso si ay u soo jiidato ninkeeda oo uu u hanto iyada oo aan muujin wax iskacaabbin ama diidmo ah, hanasho leh asluub, tudhid, iyo dabacsanaan. Marka dareenka raaxada galmadu si fiican u fusho oo ay labadaba si farxad leh u taabato, ninku waxaa uu la qaybsadaa ooridiisa dareenka farxaddaas isaga oo ku duceeya kana barya Eebbe (S.W.T) inay ku wada noolaadaan nolol leh farxad iyo barwaaqo.
Cabdullaah Bin Caamir (R.C) waxaa uu ka soo weriyay Rasuulka Eebbe (N.N.K.H) inuu yidhi: “Marka midkasta oo idanka mid ah uu guursado oori cusub, waa inuu gacanta saaraa wajigeeda dabadeedna uu yidhaahdaa:
‘Eebbow waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda iyo khayrka ay u janjeedho, waxaana kaa magangelayaa sharkeeda iyo sharka ay u janjeedho.” [Diiwaanka Xigashada Xadiiska: Sunanka Abu Dawuud iyo Sunanka Ibnu Maaja].
Marka laga hadlayo wax dhicikara, duco kasta oo haweenka si gaar ah ula xidhiidha, raggana way khusaysaa sababta oo ah midkasta lammaanaha waxaa uu rabaa inuu helo wanaagga midka kale. Sidaas daraadedd, haweeneyda waa loo oggolyahay inay iyaduna ducadan ugu ducayso ninkeeda. Oorida cusub waxay iyaduna odhanayasaa isla ducadan marka ay saygeeda cusub la kulanto marka ugu horraysa, waxayna dhahaysaa: “Eebbow! Waxaan ku weydiistay khayrkiisa iyo khayrka uu u janjeedho, waxaana ka magangelayaa sharkiisa iyo sharka uu u janjeedho.”
AQRISO: 7 Qodob Oo Halis Ku Ah Quruxda Maqaarka
Sababta ducadan loo akhriyayaa waxaa weeye iyada oo Ibna Aadamku aanu ka badbaadin faqa xun ee Shaydaanka marka laga reebo Ambiyada kaas oo gayaysiinkara qofka inuu u janjeedhsado dhinaca xumaanta ama sharka. Sidaas daraadeed, waxaa lammaanaha cusub lagu dhiirigelinayaa inay ducada midkastaba ugu duceeyo midka kale si ay uga nabadgalaan sharka Shaydaanka ee isku dira sayga iyo ooridiisa. Ducada macnaheedu maaha in saygu ama ooridu tahay shar ee waxaa weeye uun in laga nabadgalo saamaynta sharka Ibliiska. Habeen ka kowaad ee guri-galka, caruuska iyo caruusaddu aad ayay u daallanyihiin culayska hawlaha iyo diyaargarowga ee maalinta arooska awgeed. Markaas maaha wax khasab ah ama waajib ah inay habeenkaas sameeyaan galmo. Haddii uu rabo, waxaa habboon inuu habeenka kowaad u sheekeeyo, qalada iyo cabsida ka saaro gabadha, niyadeedana dejiyo oo aanu kula degdegin galmo maadaama ay nolosha intii badnayd sugayso oo ay galmada u haystaan waqti badan oo ku filan. Laakiin, Si kastaba ha noqotee, waa ay doorankaraan inay galmo sameeyaan habeenka kowaad ee arooska haddii aaynay dhib iyo culays midna ku ahayn. Markasta oo sayga iyo ooridu rabaan inay galmo sameeyaan, waa inay akhristaan ducada lagu ducaysto oo uu samaynjiray, Muslimiintana kula dardaarmay Rasuulka Eebbe (S.C.W), taas oo ku cad xadiiska soo socda:-
Eebbe (S.W.T) waxaa uu leeyahay: “Kuwa (xaqa) rumeeyow! Ka jooga wax badan oo male ah (tuhun). Xaqiiqdii, malaha qaar waa dembi.” [Suuradda Xujuraat, Aayadda: 12aad]. Abu Hurayra (R.C) waxaa uu ka soo weriyay Rasuulka Eebbe (N.N.K.H) inuu yidhi: “Iskadadka kale, ha is basaasina, ha is necbaanina, ha kala teginina (qaraabada ha goynina), noqda addoomo Eebbe, noqda walaalo.” [Diiwaanka Xigashada Xadiiska: Saxeex Al-Bukhaari].
Soomalidu meelkastaba ha jooogtee, waa inay cidhitirtaa dhaqanka foosha xun ee Gudniinka Fircooniga ah oo raacdaa gudniinka Sunnaha ah ee wiilka laga jarayo buuryada, gabdhahana laga jaro caarada wasladda huwan xubintooda taranka. Ujeedada labadan caaro loo jarayo waxa weeye in laga ilaasho inuu jeermis ku dhasho xubnaha taranka ee ragga iyo haweenka.
Title: Talooyinka Habeenka Kowaad ee Arooska.